iimveliso Anebon metal Co., LTD
Anebon yasekwa ngo-2010 iqela lethu ezizodwa kuyilo, imveliso kunye nokuthengiswa eshishini zekhompyutha le. Kwaye siyazi ukuba sidlule ISO 9001: 2015 certification.
Siye phambili, oomatshini kakuhle kwaye high eqhelekileyo ukususela eJapan, kuquka ezahlukeneyo CNC yokugaya kunye koomatshini sijike, umphezulu screwdriver, grinder lwangaphakathi kunye Arabha, WEDM-HS / LS, ezinkulu laser ukusika umatshini ect. Kwaye nathi sibe izixhobo kakhulu advanced uvavanyo (CMM 3D Ukulungelelanisa Machine yokulinganisa, CCD kakutsha optical Ubhaqo njl) Izahlulo kunye nokumelana ukuya ± 0.002mm na inkxaso.
Kwiminyaka engaphezu kwama-10 of Precision Engineering:
nezimo High na ingenelo yethu, ukwenziwa ndayame na siseko wethu, ukwanelisa abathengi na befuna lwethu, ukuphumeza imeko win-win injongo yethu. Emva kweminyaka yophuhliso, Anebon Metal anazo kwimarike ekhethwayo mveliso ezahlukeneyo isiphelo eziphakamileyo iindawo ngqo metal inkxaso, njenge Auto Industry, Isixhobo Medical, Petrochemical Equipment, Machinery Construction, Aviation Equipment, Industrial Connector kunye isiXhobo soQhagamshelwano. Okwangoku, siba sisebenzisane umthengi i-R & D, kunye nokunceda zokuphuculwa ngakumbi, ukuze kuqinisekiswe ingeniso umthengi lowo.
Ebudeni zonke iinkqubo yokuvelisa, Anebon Metal ingqalelo umgangatho, siya kunyamekela iimfuno zabathengi 'kunye neempawu ezizodwa imveliso. Siya kumisa isicwangciso ulawulo ngokufanelekileyo kwaye ukusiqhuba kwinkqubo. Ngesiqhelo sibe sisebenzisa izixhobo ezisemgangathweni: APQP, CP, MSA, SPC, CPK, PPAP, KAIZEN & PDCA.
iindawo ezikhupha , aluminium ukulahlwa, zinc izitho ukulahlwa kufa, izahlulo aluminiyam zifa bephosa , aluminiyam kufa uphose , izahlulo eyahlulayo kufa ;